Home News Golaha Wasiiradda oo Dood Iyo Xanibaad ka dib Goor-dhaw ka Degay Garoowe...
Golaha Wasiiradda oo Dood Iyo Xanibaad ka dib Goor-dhaw ka Degay Garoowe iyo Xaaladda oo Kacsan
Shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada waxaa lagu balansanaa in uu burrito ka dhaco Magaalada Garoowe Ee Xarunta Maamulka Puntland,sida qorshahu ahaa wasiiradda Xukumadda federaalka ayaa laga rabay in ay maantadii hore gaaraan halkaasi hase’yeeshee waxaa lagu celiyay Garoonka Magaalada Muqdisho.
Diyaaradii qaadi laheed wasiiradda ayaa ku xanibneed Garoonka aadan cadde mudo dhowr saacadood ah waxaana loo diiday in ay ka degto Garoowe sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo la hadlay Muqdisho Online.
In ka badan saacad iyo bar ayeey diyaaradu hawada ku jirtay waxaana sababtaasi lagu sheegay muran ka taagnaa Imaanshiyaha Wasiiradda oo Maamulka Puntland oo ka carooday falkii kheeyre ka xanaaqsanaa.
Sidoo kale Shirka Golaha Wasiiradda Ee Berri ka dhacaayo Magaalada Garoowe ayaa waxaa dhici karto in laga bedelo ajandaha ka hadalkiisu qorsheeysan yahay
Previous articleDHAQANKA Sharafta leh Fadhigooda ayaa loogu tagaa, halka kuwa Mudulood looga yeero…
Next articleR/wasaare Kheeyre oo Xiisad Cusub ka Abuuray Magaalada Garoowe iyo Dagaal laga Cabsi qabo+Reer Puntland oo Ogaaday Qiyaanadiisa!!
Muqdisho: Haweeney Qabtay Cudurka HIV AIDS Oo Cirbad Ku Durtay Darawal...